🥇 दन्तचिकित्सामा लेखांकन
रेटिंग: 4.9. संगठनहरूको संख्या: 107
दन्तचिकित्सामा लेखांकनको भिडियो
दन्तचिकित्सामा लेखांकन अर्डर गर्नुहोस्
दन्त चिकित्सालयहरू सधैं धेरै लोकप्रिय भएको छ। यदि पहिले दंत चिकित्सकहरूको सेवा पोलीक्लिनिकमा प्रदान गरिएको थियो भने, अब दन्तचिकित्सा सहित धेरै नै साँघुरो प्रोफाइल मेडिकल संस्थानहरूको उद्भव हुने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले डायग्नोस्टिक्स देखि प्रोस्थेटिक्स सम्म विस्तृत सेवाहरू प्रदान गर्दछ। दन्तचिकित्सामा लेखांकनको यसको विशिष्टताहरू हुन्छन्, जस्तो कि व्यक्ति आफैंलाई व्यवहार गर्ने गतिविधि पनि। यहाँ, गोदाम लेखा, चिकित्सा लेखा, कर्मचारीहरूको लेखा, सेवाहरूको लागत को गणना, कर्मचारीको तलब, विभिन्न प्रकारका भित्री रिपोर्टहरू र अन्य प्रक्रियाहरू उत्पन्न गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। धेरै दन्त संगठनहरु लेखा प्रक्रियामा स्वचालन परिचयको आवश्यकताको साथ सामना गरिरहेका छन्। सामान्यतया, एकाउन्टेन्टको कार्यहरूमा स्थितिको पूर्ण अनुगमन हुन्छ, तिनीहरूको कार्यको समय मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने क्षमता, तर अन्य स्टाफ सदस्यहरू। दन्तचिकित्साका लेखापाललाई आफ्नो कर्तव्यहरू सकेसम्म कुशलतापूर्वक गर्नको लागि, लेखा प्रक्रियाको स्वचालन आवश्यक हुन्छ। आज, सूचना प्रविधि बजारले दन्तचिकित्सा लेखांकनको बिभिन्न सफ्टवेयर प्रदान गर्दछ जसले दन्त लेखाकारको कामलाई अधिक सुविधाजनक बनाउँदछ। दन्तचिकित्सा लेखांकनको उत्तम कार्यक्रमलाई यूएसयू-सफ्ट अनुप्रयोगको रूपमा उचित रूपमा मान्न सकिन्छ। यससँग धेरै पेशेवरहरू छन् जसले हामीलाई धेरै देशहरूमा बजारमा प्रतिस्पर्धामा जित्न सहयोग पुर्‍यायो। दन्तचिकित्सा लेखांकनको कार्यक्रम प्रयोगको सजिलोता, विश्वसनीयता र जानकारीको भिजुअल प्रस्तुतीकरणद्वारा छुट्याइएको छ। थप रूपमा, यूएसयू सफ्ट अनुप्रयोगको प्राविधिक समर्थन एक उच्च व्यावसायिक स्तरमा गरिन्छ। दन्तचिकित्सा लेखांकन सफ्टवेयरको लागत पक्कै तपाइँलाई खुशी पार्नेछ। युएसयू-सफ्टका केही सुविधाहरू हेरौं जुन दन्तचिकित्सामा लेखा कार्यक्रमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हाम्रो नयाँ सफ्टवेयर प्रयास गर्नुहोस्। यो बजारमा सब भन्दा लाभदायक र प्राविधिक उन्नत अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। समय बचत गर्नुहोस् र तपाईंको व्यवसायलाई सजिलो-प्रयोगको साथ दन्तचिकित्सा व्यवस्थापनको पूर्ण-सुविधायुक्त सफ्टवेयरको साथ बढाउनुहोस्। एक साधारण कार्यप्रवाह र सहज उपयोगकर्ता ईन्टरफेसमा संयुक्त शक्तिशाली सुविधाहरू पत्ता लगाउनुहोस्। कम क्लिकहरू र कम पैसाको लागि अधिक गर्नुहोस्। युएसयू सफ्ट अनुप्रयोग डाक्टरहरूको लागि आदर्श हो, किनकि उनीहरूले दन्त चिकित्सा प्रबन्धन सफ्टवेयरको साथ केही मिनेटमा मेडिकल रेकर्ड, डायरी र बिलहरू भरेर उनीहरूको of०% बचत गर्दछ। भेटघाटहरूको तालिका सँधै हातमा हुन्छ, र अनुस्मारकहरूले डाक्टर र बिरामीहरूलाई तोकिएको समय बिर्सन्छन्। उपचार योजनाको स्वचालित गणनाले बिरामी नियुक्तिहरूको समय कम गर्दछ। पूरा भएको कामको पारदर्शी रिपोर्टिंग दन्तचिकित्सा लेखांकन प्रणालीमा धन्यवाद छ, साथै कर्मचारीहरूको काममा लिंक गरिएको बोनसको द्रुत गणना। उपकरणको विस्तृत श्रृंखलाको साथ एकीकरणले तपाईंको दन्त चिकित्सालाई अझ प्रभावकारी बनाउन अझ बढी उपकरणहरू दिन्छ। दन्तचिकित्सा लेखांकनको कार्यक्रमले अनलाइन नगद रेजिस्टरहरू र एक्स-रे प्रणालीहरूलाई समर्थन गर्दछ।
नियमित कार्यहरू र नियमित कार्यहरू अनुप्रयोग द्वारा पूरा हुन्छन्। गणना गर्नुहोस् डाक्टरहरू र रिसेप्शनिस्टहरूले बिरामी रेकर्डहरू, बिलहरू, रिपोर्टहरू, सम्झौताहरू, व्यावसायिक प्रस्तावहरू, र अन्य कागजातहरू भर्न कति समय खर्च गर्छन्? र एक नयाँ आउने व्यक्तिलाई यी ज्ञानहरू सिकाउन कति घण्टा खर्च हुन्छ? मानक र नियमित प्रक्रियाहरूको स्वचालनले कर्मचारीहरूलाई आधारभूत कामको लागि मूल्यवान समय दिन्छ। जटिल गणना सेकेन्डमा गरिन्छ। जटिल गणनामा वा एकल कर्मचारीको त्रुटि गैर-मानक रिपोर्टहरू भर्नाले कम्पनीलाई यसको राजस्वको पर्याप्त अंशबाट वञ्चित गर्न सक्दछ। प्रशासकले मालिसियस रूपमा गल्ती गर्दैन; यो साधारण मानव त्रुटि हो। सफ्टवेयर मानव होइन, यसले गल्ती गर्दैन। त्यसोभए यस अवसरको प्रयोग गर्नुहोस् र सदाका लागि गल्तीहरूबाट मुक्त हुनुहोस्। कर्मचारी समय तालिका दन्तचिकित्सा लेखांकनको कार्यक्रमको पनि एक धेरै उपयोगी सुविधा हो। प्रत्येक कर्मचारीको तालिका बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी, बिरामीको अपोइन्टमेन्टको यस्तो श्रृ build्खला बनाउनुहोस् ताकि डाक्टरले प्रत्येक भेटमा हतार नगरी काम गर्दछ। त्यसो गर्दा, श्रृंखलासँग तालिकामा कुनै प्वालहरू हुनेछैन र व्यर्थ श्रम घण्टा हुँदैन।
औषधि ट्राफिक निगरानी प्रणाली भनेको के हो? युनिफाइड लेखा प्रणाली उपभोक्ताहरुलाई अवैध औषधीहरुबाट जोगाउन र नागरिकहरु र संगठनहरुलाई एक औषधीको वैधता चाँडै जाँच्न सेवा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। थप रूपमा, दन्तचिकित्सा लेखा प्रणालीको परिचयले प्याकेजको आवागमनको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ, साथै जानकारी जुन यसले पछिल्लो सर्कुलेशनलाई असम्भव बनाउँदछ (उदाहरणका लागि प्याकेज पहिले नै बेचिएको वा अन्यको लागि सर्कुलेसनबाट फिर्ता लिइएको जानकारी कारणहरू)।
इन्टरनेटमा सित्तैमा प्रदान गरिएको दन्तचिकित्साका लेखा कार्यक्रमहरूमा भर पर्नु बुद्धिमानी होइन। एक चलाख प्रबन्धकले बुझ्दछ कि एक राम्रो व्यवसाय को एक गुणवत्ता अनुप्रयोग को आवश्यकता छ। जहाँसम्म, नि: शुल्क अनुप्रयोगमा गुणवत्ताको स .्केत भने छैन। हामी तपाइँको दन्तचिकित्साको काममा तपाइँलाई केहि विशेष र उपयोगी प्रस्ताव गर्दछौं। हामीले अनुभव प्राप्त गर्यौं र तपाईलाई दन्तचिकित्सा लेखांकनको कार्यक्रमको उच्च गुणस्तर, साथै टेक्निकल सपोर्ट टीमको आश्वासन दिन सक्छौं। हाम्रो पेशेवरहरू सँधै तपाईको समस्यामा सहयोग पुर्‍याउन खुशी छन्, साथै युएसयू-सफ्ट अनुप्रयोगको कार्यहरूको पहिल्यै अधिग्रहित प्याकेजलाई केहि नयाँ उन्नत प्रकार्य प्रदान गर्दछ। केवल एक चीज जुन तपाईंको क्लिनिकलाई अलग गर्दछ र यो कार्यक्रम निर्णय हो जुन तपाईं आफैले आफैंलाई बनाउनु पर्छ। हामीले तपाईंलाई प्रणालीबाट के प्राप्त गर्न सक्दछौं भनेर देखाएका छौं, बाँकी तपाईंमा निर्भर गर्दछ!